CIRAAQ: Tirooyin iskhilaafsan oo kusaabsan dhimashada askarta labada dhinac
Sida ay werisey IOL, Ciraaq waxay sheegatay in ay Maraykanka ka dishey 50 askari [waa dagaalkii shalay], halka uu Maraykanku sheegtay in ay Ciraaq ka dileen 2000 oo askari. Ciraaq waxa kale oo ay sheegteen in ay Maraykanka ka gubeen lix taangi, sawirada ay soo daabacday IOL ayaa muujinaya carruur reer ciraaq oo ku dul cayaaraya taangi lagu sheegay in laga gubey Maraykanka [Eeg.IOL],. Dhanka kale hay'adda reuters ayaa werisey duqayn loo geystey magaalada Baqdaad iyo in la xiray wadooyinka magaalada kabaxa ama soo gala. Sawirada reuters ayaa muujinaya meelo kamid ah Baqdaad oo gubanaya [eeg reuters].
NBC: TV-ga NBC ee maraykanka waxa uu maanta sheegay in weriye ula socdey Ciidanka Maraykanka ee TV-gaas wararka usoo diri jirey uu dhintay, waxana TV-gu intaas kudaray in uu weriyahaasi u dhintay xanuun sanbabka ah- pulmonary embolism. Weriyahan dhintay oo magaciisu yahay David Bloom da'diisuna ahayd 39jir waxa uu NBC uga soo waramayey jiida hore ee dagaalka Ciraaq.
BASRA: Dagaalkii Basra oo sii socda iyo Ingiriiska oo burburinaya taalooyinkii Saddam ka daawo halkan ITV.
Mudaharaadyo looga soo horjeedo dagaalka Ciraaq ayaa maanta ka dhacay dalka Ingiriiska, Japaanka iyo meelo kale oo dunida ka mid ah sida auu kusoo waramay ITV, Tv-gu waxa uu sheegay in badanaa dadka Ingiriiska ay hadda kasoo horjeedaan dagaalka Ciraaq. Mudaharaadka ka daawo halkan.
VIDEO: Warkaan halkan ka daawo
Ugu yaraan 12 katirsan ciidaka Kurdish-ka ayaa dhintay, 45 kalena waa dhaawacmeen kaddib markii kolonyo ciidamada Kurdish ah ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku, tan oo ka dhacday woqooyiga Ciraaq, sidaas waxaa weriyey cbc [ka Dhegeyso.Halkan]. Waxaa wararku sheegayaan in kolonyada gawaarida ah ee laduqeeyey ay lasocdeen ciidanka gaarka ee Maraykanka. Wararka ugu horeeyay ee kasoo baxaya halkaas ayaa sheegay in uu duqayntaas kudhintay nin kamid ah madaxda mucaaradka Kurdishka. Hay'adda wararka ee AP ayaa werisey in weerarkaas ku dhintay nin ay walaalo yihiin hogaamiyaha qayb ka mid ah ciidanka Kurdishka. Dadka dhaawaca aadka u darana waxaa ka mid ah Wajy Barzani oo ay walaalo yihiin Massoud Barzani oo ah hogaamiyaha xisbiga kurdishka ee loo yaqaan Kurdistan Democratic Party. Kurdishku waxay dhanka woqooyi dagaal kagala jiraan Ciraaq. Sida ay werisey IOL oo soo xiganeysey faransiiska wararka u faafisa ee loo yaqaan AFP, waxay sheegeen in duqayntaas ay ku dhinteen askar ka mid ciidanka gaarka ah maraykanka. War uu faafiyey TV-ga Canada ee CBC ayaa tirada dhimashada Kurdishka halkaas ku dhintay ka dhigtay 17, waxana CBC sheegtay in gawaarida la weeraray la socdey weriye ka tirsan CBC canada iyo weriye katirsan BBC-da. Waxana uu TV-ga sheegay in markii hore maraykanku sheegay in ay kaga dhinteen 3 askarta gaarka ah laakiin markii dambe ay taas maraykanku ka noqdeen. Waxaa TV-ga canada shabakadiisa internetka uu kusoo sawiray gawaari gubtey.
Wararka Baqdaad kasoo baxaya ayaa sheegaya in gelinkii hore ee Axada ay sii socotey duqayntii ay Ciidamada Maraykanku horkacayo ku wadeen magaaladaas. Waxaa warku sheegay in Sabtidii madfac ku dhacay meel 100 mitir u jirta Hoteelka lagu magcaabo Palestine Hotel oo ah meesha ay degganyihiin badanaa weriyayaasha caalamig ah ee dagaalada uga soo warama Baqdaad. [Daawo.Halkan]
Wararka soo kala horjeeda ee Baqdaad: Daawo.Halkan.
Kolonyo gawaari ah oo wadey safiirka Ruushka u fadhiya Ciraaq oo u sii jeeday Suuriya ayaa la weeraray, waxaana warku sheegay in weerarkaas ay ku dhaawacmeen dublomaasiyiin la socotey safiirka, lamana cadayn cidda ka dambeysa weerarkaas, sida ay werisey warbaahinta Australia. Dhanka kale wakaaladda Ruushka wararka u faafisa ee loo yaqaan interfax waxay sheegtay in waftiga safiirka Ruushka ay gaareen magaalada Feluja oo ka tirsan Ciraaq, waxaana u haray 800 ilaa 900km ilaa ay gaarayaan magaalada dimishiq [Damascus] ee caasimada Suuriya, waxayna halkaas ku beeganyihiin habeenimada Isniinta. Ruuska ayaa lagu soo waramay in uu degdeg ugu yeeray safiirada US iyo Ciraaq u fadhiya dalka ruushka uuna weydeystey in la nabad geliyo dadka u dhashay Ruushka ee jooga Ciraaq sid ay werisey IOL.
"Qofkasta oo weeraraa dadka kale, dhiig quba, dhaawac gaarsiiya sharafta dadka iyo dulka waa argagixiso" sidaas waxaa yiri Mohamed Sayyed Tantawi oo kamid ah culimada ugu sareeya Masar. Sheekha oo Sabtidii la hadlayhey warbaahinta wuxuu yiri qofkasta oo aadaya Ciraaq albaabadu waa u furanyihiin, sida ay werisey IOL.
Sida uu weriyey TV-ga Canada ee CBC, waxaa dhalashadii [citizenship] dalka Ingiriiska laga xayuubiyey Abu Hamza al-Masri oo ah shiikh ka wacdin jirey masjid kuyaal dalkaas. Waxaa warku intaas ku daray in al-Masri uu ka wacdinjirey masjid kuyaal UK bannaankiisa kaas oo sida warku sheegay uu dhiiri gelinayey Jihaad iyo in lala dagaalamo Ingiriiska jooga Ciraaq. Dhalashada laga qaaday al-Masri waxay suurtagal ka dhigeysaa in loo tarxiilo Yemen si loogu soo oogo dacwadda dhanka ka ah oo halkaas loog ahaysto, taas oo ah in lagu eedeeyeymarkabkii maraykanka USS Cole ee October 2000 la duqeeyey, kaas oo ay ku dhinteen 17 maraykan ah. Waxa kale oo al-Masri lagu eedeyey afduub iyo dil afar joornaaliste oo reer galbeed ah tan oo dhacday sannadkii 1998. Abu Hamza al-Masri waxaa la sheegay in dagaalkii Afganistaan kaga horyimaadeen Ruushka ay kaga go'een labada gacmood, isla mar ahaantaana ay il kaga dhacday. Qareenka u doodayey al-Masri waxa uu sheegay in aan UK awood u lahayn in ay dhalasha ka xayuubiyaan al-Masri kuna celiyaan wadan dadka ciqaaba. Dawladda Ingiriiskuna waxay sheegay in al-Masri loo cuskaday xeer gaar ah oo ogolaanaya in qofkii laaji ah [immigrants] oo halis-daran ku noqda kahor imaadka danaha dalka laga xayuubiyo dhalashada.